आइडिया स्टुडियोमा आएका फरक शैलीका चार उत्पादनमुखी योजना - Idea Studio Nepal
– दिवाकर उप्रेती
| आइतबार, असोज २४, २०७८
अन्य देशबाट आयात गर्ने गरिएका सामानहरू नेपालमै पनि उत्पादन हुन थालेको छ।
युवाको सोच र इच्छाशक्तिका कारण नेपालमा यस्ता व्यवसायहरू फस्टाइरहेको छ । यी व्यवसायको सुरुआत नेपालमा हुँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग पनि भइरहेको छ भने स्थानीय उद्योगले प्रविधिमा समेत नयाँ छलाङ लगाउन सकेको छ । अझ यस्ता नयाँ योजनाले थप साथ र सहयोग पाएको खण्डमा अझै माथि पुग्न सक्छ भन्ने पनि देखिन्छ ।
यी उद्योगले साथ पाएको खण्डमा उत्पादनको वृद्धि मात्र नभइ आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सक्ने देखिएको छ ।
आइडिया स्टुडियो सिजन– ५ मा प्रेमकृष्ण प्रजापति, सुनिल बानियाँ, तारा राई, डा. भीम काफ्ले आएका छन् । उनीहरूले फरकफरक व्यावसायिक योजना लिएर आएका हुन् । यी चारैजनाको योजना पृथक र दूरदर्शीसमेत रहेको छ ।
मध्यपुर ठिमीका प्रेमकृष्ण प्रजापति माटोको सामान बनाउँछन् । ६३ वर्षका प्रेमकृष्णले विगत ३१ वर्षदेखि सो काम गर्दै आएका छन् । उनले सेरामिक्स नामको उद्योग सञ्चालन गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । सेरामिक्सले प्लेट, कप, बाथरुम टायलजस्ता गुणस्तरीय डेकोरेसनका सामान बनाउँदै आएको छ ।
उनी भन्छन, ‘यो अवधिमा थुप्रै अनुभव बटुलेको छु । आफ्नै देशको कच्चा सामानबाट यो बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा यी सामान सस्तो पनि छ ।’
पहिल्यैदेखि यो काम गर्दै आएका प्रेमकृष्ण माटो, ढुङ्गाजस्ता वस्तुको मिश्रणबाट सबै खालका सजावटको वस्तु बनाउँछन् । उनी हाल बालुवा खानीबाट माटो र भारतबाट विभिन्नखालका ढुङ्गा आयात गरेर काम गर्दै आएका छन् । प्रेमकृष्णको व्यक्तिगत इच्छाशक्तिबाट स्थापना भएको सेरामिक्स अहिले उचित बजारीकरणको लागि अवसर लागिपरेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सबै थोक छ । तर, सरकारको बेवास्ता गर्दा नयाँ युवासम्म यहाँको खनिज पदार्थबारे जानकार छैनन् ।’
प्रेमकृष्णको व्यवसायले अन्य देशबाट आयात हुने सजावटका सामानहरूलाई विस्थापन गर्न सक्छ । साथै, सेरामिक्सले नेपालमै यी वस्तुको उत्पादन गर्न र बजारीकरणका लागि समेत काम गरिरहेको छ ।
व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका प्रेमकृष्ण नेपालमै रहेको माटो, ढुङ्गा र अन्य वस्तुको मिश्रणमा निकै गुणस्तरीय सामान बनाउन सकिनेमा ढुक्क छन् । साथै, उनको यो योजनाबाट आइडिया स्टुडियोका निर्णायकहरूले उचित सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
गोरखाका सुनिल बानियाँको सोचमा बनेको ‘न्यानो नानी’ आइडिया स्टुडियोसम्म आइपुगेको छ । नवजात शिशुहरूलाई यो उपकरणले न्यानोपन दिन्छ ।
सुनीलको समूहमा ६ सदस्य छन् । सो समूहले विभिन्न विधाका इन्जिनियरको सहकार्यमा काम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा रहेर काम गर्दै आएका सुनीलले यो काम पनि यहीँबाट गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै साथीहरू इन्जिनियर भएकाले हाम्रो सोच र सामानलाई उद्योगसँग जोड्न आइडिया स्टुडियो आएका हौँ ।’
सुनीलले बनाएको न्यानो मेसिन ३ सयभन्दा बढी नवजात शिशुहरूको उपचारमा प्रयोग भइसकेको छ । उनको यो मेसिन अहिलेसम्म १६ वटा अस्पतालमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
‘सस्तो, भरपर्दाे र सजिलै चलाउन सकिने हुनाले यसको माग हस्पिटलमा बढेको छ,’ उनी भन्छन, ‘अरु मेसिन डाक्टरले मात्र चलाउन सक्थे भने यो नर्सको पहुँचमा समेत छ ।’
अहिलेसम्म नेपालका विभिन्न १६ वटा ठाउँहरूमा यो उपकरण सफलतापूर्वक प्रयोगमा आइसकेको छ ।
मातृ मृत्युदर घटाउन तथा नवजात शिशुहरूलाई हुने हाइपोथर्मिया तथा श्वासप्रश्वासको समस्यालाई पनि सामाधान गर्ने उद्देश्य लिएको न्यानो नानीले प्रशंसा कमाएको छ । साथै, निर्णायकहरूले पनि यसमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आस्था अर्ग्यानिक कृषि फार्म
बङ्गुर भनेको नै फोहोर जात हो । फोहोरमै खाने, फोहोरमै बस्ने हुन्छ । यो सामाजिक अवधारणालाई परिवर्तन गर्न सिन्धुपाल्चोककी तारा राईले ‘आस्था अर्ग्यानिक कृषि फार्म’ सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो जनावर खोरमा थुनेर पाल्ने हो र सफा ठाउँमा राखे त्यही बस्ने गर्छ ।’
आस्था अर्ग्यानिक कृषि फार्मले सफा र स्वस्थ बङ्गुरको मासु उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
साथै, यो फार्मले स्वस्थ बङ्गुरको बच्चासमेत उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘कीटनाशकरहित तरकारी तथा फलफूलसमेत उत्पादन गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो कार्यबाट युवाहरूमा उत्प्रेरणा जागृत भए नेपालमै कृषि व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव छ ।’
ताराको कार्यबाट प्रभावित भएर उनको घरनजिकैको भाइसमेत यो व्यवसायमा संलग्न भएका छन् ।
आस्था अर्ग्यानिक कृषि फार्मले बङ्गुरको वध गरेर मासुका परिकार विभिन्न कम्पनीमा पठाउने गरेको छ । साथै, नयाँ माध्यमबाट पनि प्याकेजिङ गर्ने उद्देश्यले तारा काम गर्दै आएकी छिन् ।
उनको इच्छाशक्ति र योजनाले गर्दा उनी यो व्यवसायमा सफल भइरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नयाँ युवापुस्ताले कृषि पेसा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेबारे बताउँछिन् ।’
स्याङ्जाका डा. भीम काफ्लेले सौर्य हात वार्मर ‘न्यानो प्याड’ को योजना लिएर आइडिया स्टुडियो आएका छन् । पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काफ्लेले सौर्य हात वार्मर क्रिस्टलीय सामग्रीको उत्पादन गरेका छन् ।
न्यानो प्याड एक सानो प्याकेज (थैलो) को रूपमा छ । यसमा सौर्य ऊर्जाको भण्डारण हुन्छ, जुन आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘एउटा केमिकल छ, जसले सौर्य किरण सोस्छ । सोसेको सौर्य थैलोमा संकलन हुन्छ । चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
विशेषगरी जाडो ठाउँमा घुम्न जाने पर्यटक, मोटरसाइकल चालक, त्यस्तै चिसो ठाउँका बासिन्दाहरूका हात, खुट्टा, ढाड तथा कम्मर न्यानो बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सञ्चित रहेको केमिकल पगाल्दै त्यहाँ रहेको सानो बटम थिचेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । काफ्ले भन्छन्, ‘उचाइमा रहने वा पर्यटकले सजिलै उपयोग गर्न सक्छन् । यसले जाडोमा राहत दिनेछ ।’
यो उत्पादनले जाडो ठाउँमा बस्ने मानिसमा चिसोको समस्या समाधान गर्नेमा काफ्ले ढुक्क छन् । काफ्लेसँगै निर्णायकहरू पनि यो उत्पादका निम्ति सहयोग गर्न इच्छुक छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका व्यावसायिक योजना आइडिया स्टुडियो सिजन– ५ को डिल राउन्डमा आइपुगेका योजना हुन् । यो राउन्डमा माथि उल्लेखित चारसहित अन्य चार जनाले पनि नेपालमै व्यवसाय, नेपालमै बन्न सक्ने योजना सुनाए । जसमा हिमालको सातु, फुङ्गो फुड, मोतीखेती र पोथी नामक योजना प्रस्तुत भए ।
जम्मा आठवटा व्यावसायिक योजनामध्ये पोथी नामक योजनाले उत्कृष्ट व्यवसायको रूपमा बिउपूँजी पाउन सफल भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २४, २०७८, १९:२५:००